Fakana an-keriny :: Avotra ilay zaza, telo taona, lasan’olon-dratsy - ewa.mg
Fakana an-keriny :: Avotra ilay zaza, telo taona, lasan’olon-dratsy
News - Fakana an-keriny :: Avotra ilay zaza, telo taona, lasan’olon-dratsy
Votsotra afak’omaly, teo am-pelan-tanan’ny jiolahy, ilay zazavavy kely, telo taona, nisy naka an-keriny tany Marotaolana-Tsiafabositra, any Maevatanàna tamin’ny 2 jolay lasa teo. Tany Mahitsy tao amin’ny mpivady iray no hita ilay zaza.
Vokatry ny fisamborana ny iray tamin’ireo jiolahy naka an-keriny nataon’ireo zandary tany Ankazobe, afak’omaly, no niafara tamin’izao fahatrarana an’ireo jiolahy izao.
“Nahazo vaovao tamin’olona izahay hoe any Antokonana-Irindra, any Tsaramasoandro, ny iray tamin’ireo mpaka an-keriny saingy efa niova anarana. Rehefa nidina tany an-toerana izahay dia tratra tokoa ilay olona. Tamin’ny famotorana no nanekeny fa nisy tokoa ny fakàna an-keriny. Izy ihany koa no nanoro ny toerana misy ny zaza. Tany Mahitsy no napetrany ilay zaza, tao amin’olona mpivady iray. Samy efa voasambotra avokoa izy ireo”, araka ny fantatra.
L’article Fakana an-keriny :: Avotra ilay zaza, telo taona, lasan’olon-dratsy est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 29/07/2019
Kitra – PSG (3) – (0) Leipzig: niteraka savorovoro tao Paris ny fandresena
Voalohany teo amin’ny tantaran’ny Paris St Germain no hiatrika ny famaranana hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa ry zareo Parizianina. 50 taona aty aoriana vao tonga eo amin’izany dingana izany ry zareo, taorian’ny nandreseny tamin’ny isa mazava 3 no ho 0 ny RB Leipzig, teo amin’ny manasa-dalana. Baolina nampidirin’i Marquinos, teo amin’ny minitra faha-13 sy ny an’i Di Maria minitra faha- 42 ary nofaranan’i Juan Bernat, minitra faha-56.Nanoloana ity fandresena goavana ity, nivoaka naneho ny hafaliany nanerana ny arabe tao Paris, Renivohitra ireo vahoaka frantsay nampaneno ny “klaxon” n’ny fiarany. Nitsoka anjomara sy kiririoka nandihy sy nitandahatra namonjy ny Champs Elysées ireo vahoaka analinkisa.Voatery niditra an-tsehatra ny polisy nandamina ka nandefa entona mandatsa-dranomaso hanaparitahana ireo vahoaka nifaly. Teo no nahatezitra ireo mpomba ny PSG ka nahatonga azy ireo nanimba ny fiaran’ireo mpitandro filaminana sy nitora-bato azy ireo. Nanoloana izany, nisy ireo olona nosamborina, nanao fanararaotana sy namboly fanakorontanana. Na teo aza izany, tsy nisy ny aina nafoy teo amin’ny roa tonta.Tsy nanafina ny hafaliany i Nasser Al-Khelaifi, filoha mpitantana ny ekipan’ny PSG, taorian’ity fandresena ity ka nanambara fa nahavita dingana goavana ny Paris St Germain, saingy tsy mbola vita ny lalao fa mila mibata ny amboara amin’ny famaranana, hatao ny alahady ho avy izao. TompondakaL’article Kitra – PSG (3) – (0) Leipzig: niteraka savorovoro tao Paris ny fandresena a été récupéré chez Newsmada.
Fetin’ny Fahaleovantena; mpianatra 5 000 naneho ny talentany
Ho fankalazana ny faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, nikarakara hetsika natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny minisiteran’ny Tanora,omaly teny Mahamasina. Tanora sy mpianatra manodidina ny 5 000 no nandray anjara ka nandraisan’ireo CEG sy lycée teo anivon’ireo CISCO ato anatin’ny Dren Analamanga. Fanaovana fitafy mampiavaka ny faritra (DREN) 22 no nanamarihana izany. Nisy koa ny diaben’ny tanora sy ny ankizy nanodidina ny kianjan’i Mahamasina sy ny fampisehoana dihy isam-paritra tao amin’ny kianja mitafo. Ankoatra izay, misy fikambanana tanora samihafa ihany koa nitondra ny talentany nanafana ny lanonana tamin’ny alalan’ny dihy mirindra (flashmob), araka ny fanazavan’ny talen’ny fampiroboroboana ny fialamboly ao amin’ny minisiteran’ny Tanora, Razafindraibe Herisoa.Tao anatin’ny tapany faharoa tamin’ny hetsika ny famaranana ilay fifaninanana « foot de l’indépéndance » ho an’ny ankizy sy ny tanora vehivavy. Hetsika nokarakarain’ny komity nasionaly miaraka amin’ny governemanta malagasy ary notohanan’ny Fondation Telma.Vonjy A. L’article Fetin’ny Fahaleovantena; mpianatra 5 000 naneho ny talentany a été récupéré chez Newsmada.
Tao anatin’ny fito volana: ankizivavy nanaraka lehilahy ny ankamaroan’ireo tsy hita
Hatramin’ny niandohan’ny taona, nahatratra 400 latsaka ireo ankizy tsy hita. Isa izay hifangaroan’ny sokajin-taona isan-karazany. « Hatreto, mbola ireo adolantsento, eo anelanelan’ny 14 ka hatramin’ny 18 taona no tena betsaka tsy hita. Ary tovovavy ny ankamaroan’ireo andraisana fitarainana. Antony voalohany amin’izany ny fanarahana lehilahy », hoy ny fanazavan’ny kaomisera Ranaivoson Alexandre. Eo amin’ilay taona misandratra fitiavana ireo tanora ka manaotao foana. Ireo tovolahy indray kosa, misy ireo miaraka amin’ireo namany ka tsy hita tampoka. Mahavoasazy anefa ny famantarana fa any amina olona ilay ankizy tsy hita, hoy hatrany ny fanazavana voaray. Tranga iray mpiseho matetika koa ireo ankizy miasa aman’olona ka mandositra tampoka ary tsy hita intsony.Ho an’ireo ankizy 6 taona ka hatramin’ny 14 taona indray, misy ireo mandao ny tranony noho ny fahatahorana amin’ny zavatra nataony. Eo koa ny fisarahan’ny ray aman-dreny, hoy izy. Samy mihevitra ny rainy na ny reniny fa any amin’ny iray amin’izy roa ilay ankizy kanjo tsy any amin’izy ireo. « Ireny indray matetika any amin’ny havany ireo ankizy rehefa mitsoaka », hoy hatrany io tompon’andraikitry ny seraseran’ny polisim-pirenena io.Ho an’ireo ankizy kely hatramin’ny 6 taona indray, misy ireo mandeha miantsena miaraka amin’ny ray aman-dreniny dia tsy hita. Eo koa ireo bedy ka mandao ny tokantrano misy azy. Mbola mananosarotra anefa ny fitadiavana ireo ankizy very. Misy ireo ray aman-dreny mampahafantatra ny polisy ilay tranga ary tsy mampilaza rehefa hita ireo ankizy. Tsara kosa anefa ireo manao filazana ao amin’ny tambajotran-tserasera sy mametaka peta-drindrina ary koa mampilaza ny polisy. Afaka manao fampilazana ny tranga any amin’ny onjampeom-pirenena ireny ary manamora ny fitadiavana ilay ankizy izany. Henintsoa HaniL’article Tao anatin’ny fito volana: ankizivavy nanaraka lehilahy ny ankamaroan’ireo tsy hita a été récupéré chez Newsmada.
Asan-dahalo tany Miandrivazo :: Olona dimy namoy ny ainy, may ny tanàna manontolo
Mahery vaika ny asan-dahalo nitranga tany Miandrivazo farany teo. Niharan’ny fanafihana niharo vono olona sy herisetra ary fandrobàna goavana ny tanàna iray any Ambilorano, tamin’ny 15 jolay lasa teo. Nodoran’ireo daholo ny trano am-polony maro tao amin’ilay toerana. Novonoiny ny telo tamin’ ireo fokonolona. Omby anjatony no lasa ka tsy mbola misy tafaverina. Nahalavo roa lahy tamin’ireo mpanafika ihany koa ny fokonolona. Tsy mbola nahitam-bokany ny fanarahandia nifarimbonan’ny zandary sy ny tafika am-polony maro, hatramin’ny omaly. « Tokony ho tamin’ny 5 ora maraina ireo dahalo manodidina ny efapolo mitondra basy no namahatra tamin’ny tanàna antsoina hoe Gara, ao anatin’ny fokontany Ambilorano, tamin’ny alarobia 15 jolay 2020. Nisy ny fifandonana tamin’ireo fokonolona satria tsy nanaiky lembenana ireto farany. Vokany, olona telo no maty avy amin’ireo mponina. Nisy roa hafa tamin’ireo dahalo no lavo avy amin’ny tifitr’ireo fokonolona ihany koa. Ankoatra izay dia nisy olona telo avy amin’ny fokonolona no naratra », hoy ny loharanom-baovao nitatitra an’ity zava-niseho tany an-toerana ity. Fanenjehana an-tongotra Nahazo antso ny Zandarimaria tany Ankavandra, taorian’izay, nilaza ny fisian’io fanafihana io. Nidina tany amin’ilay toerana ireo mpitandro filaminana notarihin’ny manamboninahitra iray. Niaraka taminy ny zandary sy tafika am-polony maro. « Eo am-panaovana hetsika miaramila fampandrian-tany, any Itondy, ireo mpitandro filaminana ireo no natodi-doha any amin’io toerana io, vantany vao henonay ny fanafihana », hoy ny lehiben’ny Zandarimaria any Menabe. Mifampitady amin’ireo dahalo any an-tampon-tanety sy havoana ary renirano ireo mpitandro filaminana ireo, izay mandeha an-tongotra tsy miato, hatramin’ny omaly. Tsy nahenoam-baovao izy ireo, hatreto. Ny hany fantatra dia toa hoe efa nizarazara ireo dahalo mitondra omby an-jatony ireo. Azo antoka kosa fa samy tsy mbola misy miala an-daharana na ireo fokonolona na ireo mpitandro filaminana manenjika an’ireo jiolahy. L’article Asan-dahalo tany Miandrivazo :: Olona dimy namoy ny ainy, may ny tanàna manontolo est apparu en premier sur AoRaha.
Anatihazo Isotry: olona efatra indray maty kilan’ny afo
Nijoalajoala ny afo! Olona efatra indray kilan’ny afo nandritra ny haintrano mahatsiravina teny Anatihazo Isotry, ny alin’ny alahady teo. Araka ny tatitra nampitain’ny eo anivon’ny sampana mpamonjy voina, renim-pianakaviana iray niaraka tamin’ny zanany telo ireto kila hotohoton’ny afo ka indray niara-maty tao. Tamin’ny 9 ora alina no niantomboka ny afo izay tsy fantatra mazava ny fiantombohany fa ny afo efa nijoalajoala niainga avy amin’ny tokantrano iray no nahataitra ireo olona eo amin’ny manodidina. Tsy mbola voafaritra kosa ny isan’ireo trano may fa fotoana fohy taorian’ny firehetana, tonga haingana teny an-toerana nanao ny famonjana ny fiarabe roa niaraka amin’ireo mpamonjy voina. Efa maty ny afo tamin’ny fahatongavan’ireo mpamonjy voina teny an-toerana satria niezaka namono ny afo ireo olona eny an-toerana mandra-pahatonga ny mpamonjy voina. Nandritra ny fisavana tao anatin’ireo trano levon’ny afo ny nahitana ny fatin’ireo niharam-boina. Renim-pianakaviana 28 taona sy zazalahikely 8 taona sy zazavavikely 7 sy 5 taona. Nohamafisin’ny loharanom-baovao hafa fa nisy olona roa hafa niaraka amin’izy ireo, saingy tafavoakan’ny fokonolona ka avotra soa aman-tsara fa izy efa-mianaka no levon’ny afo tao nandritra ny firehetana.Jean ClaudeL’article Anatihazo Isotry: olona efatra indray maty kilan’ny afo a été récupéré chez Newsmada.
Notokanana omaly ny birao vaovaon’ny Federasiona Malagasy Afovoany (FMC) an’ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito etsy Soamanandrariny. Toerana natao hampivoarana ny maha olona sy ara-panahy ary hampandrosoana ny firenena ity natsangana ity. Nitokana izany ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ary nanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny fiangonana advantista amin’ny sehatry ny fahasalamana sy ny fampivoarana ny maha olona.Mitohy ny hetsika fanangonam-boky ataon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena izay nanomboka ny 22 ka hatramin’ny 24 oktobra izao. Hetsika hanairana ny sain’ny ankizy ho tia mamaky boky sy hanovo fahalalana anaty boky no tanjona. Ho an’ireo manana karazam-boky fianarana na fialamboly dia afaka manolotra izany ho azo ampiasain’ny ankizy hafa indray. Haparitaka amin’ny sekoly manerana ny Nosy ny boky voaangona hositrahin’ireo ankizy indrindra any amin’ny faritra lavitra andriana. Hangarahara tanteraka ny fitsinjarana izany.L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Ankoatra ilay lehilahy tsy nahatsiaro tena tototry ny ranontany, nianjeran’ilay rindrin-trano eny Antohomadinika Atsimo, omaly, tsy latsaky ny dimy ireo olona naratra. Voa mafy tamin’izany ny olona telo.Nitera-doza ny fandravana trano lehibe iray etsy Antohomadinika Atsimo, omaly maraina manodidina ny tamin’ny 8 ora. Nirodana tampoka ny rindrin-trano ka nianjeran’izany avokoa ny mpiasa sy ireo mpaka ranontany tao anatiny. Vokany, olona miisa fito naratra raha telo hafa naratra mafy. Lehilahy iray kosa tsy nahatsiaro tena ary voatery nalefa mihitsy teny amin’ny HJRA. Vokatry ny tsy fahaiza-manaon’ireo mpiasa tao anatiny ny nahatonga ny loza, raha ny filazan’ireo mponina eny an-toerana. « Mbola tsy tonga teny an-toerana ny tompon’andraikitra ny fandravana ilay tranobe. Ireo mpiasa tsotra sy ireo mpaka ranontany no efa niatrana teny an-toerana nanao ny asany avy. Antony nahatonga ny loza. Teny an-toerana ihany koa ny sarety miisa roa saika nitaterana ireo ranontany », hoy ny fanazavan-dRafaliarisoa Tsilavimandresy, sefo fokontany eny Antohomadinika Atsimo. « Nianjera tampoka ilay lavarangana amin’ny “béton” ka nilatsaka tamin’ireo sarety roa. Taorian’izay, nianjera tampoka sy nirodana koa ny rindrina ka nilatsahan’izany ireo mpaka ranontany », hoy ny filazan’ny mpivarotra iray eny an-toerana. Voa teo amin’ny tarehiny, ny tanany, ny tongony avokoa ny ankamaroan’ireo olona naratra. “Lehilahy iray kosa nalaina tao ambanin’ny tany ary nalemilemy tanteraka”, hoy hatrany ny fanazavany.Tsy tonga teny amin’ny fokontanyTaorian’ny loza, niray hina niara-namoaka ireo tototry ny ranontany ny fokonolona sy ireo avy ao amin’ny BMH. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa efa herinandro omaly ny fandrodanana natao. Tsy tonga eny amin’ny fokontany ny taratasy fangatahana mahakasika izany. « Ny fampahafantarana izany no tonga eto aminay fa tsy nisy fangatahana natao », hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitry ny fokontany.“Tsy mahafantatra koa ny fisian’ireo mpaka ranontany teny an-toerana ilay teratany vahiny, tompon’ilay trano narodana nefa nanolotra fanampiana ireo niharam-boina eny amin’ny hopitaly izy”, hoy ireo mpivarotra eny an-toerana. Marihina fa olona avy eny Antohomadinika ireo mpikarama naka ranontany. Hamidiny indray izany avy eo hanotofana ireo tokotanin’olona. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tsy mbola azo ivarotana manoloana ilay trano narodana hisorohana ny loza hafa. Ireo mpivarotra kosa, mitaraina ho tsy mahita toeran-kaleha hanaovany ny asany.Henintsoa HaniL’article Trano narodana tetsy Antohomadinika: olona 7 tototry ny tany, 3 naratra mafy a été récupéré chez Newsmada.
Famerenan-kasina an’Antananarivo: nofanina hampihatra ny CMH ireo mpisehatra rehetra
Hitohy, anio, rehefa nanomboka, omaly etsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, ny fanofanana ireo tompon’andraikitra rehetra ho amin’ny fampiharana ny Fehezam-pitsipika monisipaly fikoloam-pahasalamana (CMH), eto Antananarivo Renivohitra. Anisan’ny niatrika izany ireo olom-boafidy eo anivon’ny kaominina, ny depiote sy ny solontena avy amin’ny vaomiera eny anivon’ny parlemanta, tafiditra ao anatin’izany. Eo koa ireo solontena avy amin’ny minisitera, voakasika amin’izany, manoloana ny tranga eny anivon’ny fiarahamonina sy ny fiatrehana izany.Anisan’ny iompanan’ny fanofanana ny fampahafantarana ny momba ireo andininy samihafa manoloana ny tranga mety hiseho.Fanovana sy fanitsiana ny vola aloa amin’ny sazyNy fomba fampiharana ny CMH amin’izany. Voaresaka koa ny andraikitra sy ny anjara birikin’ireo olom-boafidy sy ny mpanatanteraka amin’ity fehezam-pitsipika ity.Efa nitondran’ny eo anivon’ny mpanolotsaina fanovana sy fanitsiana ny ampahany sasany amin’ny CMH, tamin’ny fivorian’ny filankevitra farany teo. Tafiditra ao anatin’izany ny momba ireo sazy manoloana ny mety ho fihoaram-pefy na ny tsy fanarahana izany fitsipika izany.Tsiahivina fa anisan’ny manohana sy nampanao izao fanofanana izao ny eo anivon’ny Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).Synèse R.L’article Famerenan-kasina an’Antananarivo: nofanina hampihatra ny CMH ireo mpisehatra rehetra a été récupéré chez Newsmada.
Tambavy CVO sy ATA: manana tahiry iatrehana ny filana ny Imra
Afaka mampitombo ny hery fiarovana ny CVO ankoatra ny fitsaboana ny Covid-19 ampiasana azy eny amin’ny tobim-pahasalamana. “Tsy mamokatra CVO intsony ny Insititut malgache de recherches appliquées (Imra), amin’izao fotoana izao, fa ampy iatrehana ny filana ny tahiry ao amin’izy ireo”, hoy ny tale jeneraliny, ny dokotera Andrianjara Charles, omaly teny Avarabohitra Itaosy. Vonona sy ampy ny tahiry amin’ny CVO raha sanatria ka miverina miparitaka indray eto amintsika ny valanaretina Coronavirus. Tokony hanohy ny fiarovantena sy ny fiarovana ny ankohonany ny rehetra ary hanaja ny fepetra ara-pahasalamana. Mila ampiana tosika koa ny hery fiarovana ka mety ny fisotroana ny tambavy nohavaozina CVO ho an’ny olona mahazaka izany, araka ny fanazavany ihany. Ho an’ny sokajin’olona tsy mahazaka ny CVO, efa namokatra ny ATA ny Imra, samy novolavolaina iadiana amin’ny Covid-19 avokoa ireo. Mahomby amin’ny fitsaboana ny aretin’ny taovam-pisefoana ny ATA raha mahery vaika hanoherana ny tsimokaretina ny CVO. Hatreto, tsy nahitana fiantraikany hafa amin’ny vatan’ny olona mihinana azy ny ATA. Mety hampiakatra ny haavon’ny tosidra sy hahafanina eo amin’izay mampiasa azy kosa ny CVO, araka ny fanadihadiana nataon’ny mpitsabo. Samy tsy voatondro hampiasa azy ireo kosa ny vehivavy mitondra vohoka sy ny mampinono. Tsy mety ho an’ny olona manana tosidra ambony sy ireo manana toe-tena diabetika tsy voaara-maso ny CVO. Efa notsinjaraina eny amin’ny toeram-pivarotana fanafody sy eny amin’ny tsena ireo vokatra roa ireo novolavolaina iadiana amin’ny Coronavirus.Momba ny vidin’ny CVO izay tafidina hatramin’ny 300 Ar ny tavoahangy iray eny amin’ny tsena, efa manakaiky ny fe-potoana ahazoana mampiasa ka nalefan’ny mpivarotra varoboba hisorohana ny fanariana azy fotsiny. Tsy misy idiran’ny Imra ny raharaha satria 1 500 Ar ihany ny hivarotan’izy ireo ny CVO miainga ao aminy.Tsy mandray anjara amin’ny famokarana ny CVO pilina sy tsindrona kosa ny Imra fa ny ivontoerana fampiharana ny fikarohana momba ny fanafody (Cnarp) sy ny mpiray ombon’antoka hafa no misehatra amin’io sokajy io.Vonjy A.L’article Tambavy CVO sy ATA: manana tahiry iatrehana ny filana ny Imra a été récupéré chez Newsmada.